Afaka milalao Super Mario Run ho an'ny iPhone sy iPad izao ianao ao amin'ny Apple Store | Vaovao IPhone
Na dia tsy hitranga hatramin'ny 15 desambra aza ny fandefasana ny lalao, araka ny efa nanambara omaly alina tao amin'ny "The Tonight Show," Nintendo dia hanangana fampisehoana ny Super Mario Run ho an'ny iPhone sy ny iPad ao amin'ny Apple Store, mba hahafahan'ireo mpampiasa mankao amin'ny fivarotana Apple afaka milalao azy io ary manomboka mankafy izay mampanantena fa ho iray amin'ireo tsikera Apple App Store amin'ny taona. Ny fampahalalana rehetra etsy ambany.
Io no lalao tena izy voalohany an'ny Nintendo ho an'ny iPhone sy iPad, taorian'ny «andrana» marobe nataon'ny orinasa Japoney. Ary ireo izay efa afaka nankafy ny lalao dia nilaza fa mihoatra ny andrasana izany. Na dia eo aza Lalao plateforme somary hafahafa izy io satria «Endlesss Runner» ihany koa i Mario izay mihazakazaka tsy mijanona ary ny mpampiasa ihany no tokony hikasika ny efijery mba hitsambikina ary mandroso amin'ny alàlan'ny lampihazo na misoroka sakana sy fahavalo miampita ny efijery. Ankoatry ny ambaratonga 24 izay azontsika atao ankafizina amin'ny maody "mahazatra" dia misy ihany koa ny mode "Toad Rally" izay hifaninanantsika amin'ny Internet miaraka amin'ireo mpampiasa hafa hahitana hoe iza no mahazo farantsa betsaka indrindra amin'ny fotoana iray.
Ny Super Mario Run dia vidiana amin'ny $ 9,99 (€ 9,99 heverinay) izay ambony noho ny ankamaroan'ny lalao azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny, saingy ambany lavitra noho ny vidin'ny lalao Super Mario amin'ny iray amin'ireo konsole horonantsary misy azy io, noho izany satria tena tsara ny hevitra voalohany, dia tsy miahiahy izahay fa izany dia ho iray amin'ireo fahombiazana lehibe amin'ny taona ao amin'ny App Store. Ianareo izay mandeha any amin'ny Apple Store anio dia afaka manamarina izany amin'ny alàlan'ity lalao kely ity izay azo antoka fa zara raha misy, nefa tadidio fa mbola misy herinandro sisa tavela ho an'ny kinova farany hahatratra ny App Store. Ireo mpampiasa Android dia tsy maintsy miandry hatramin'ny herintaona, tsy misy daty voafaritra. Tsy hainay raha ho hita ao amin'ny Premium Resellers sy hevitra hafa amidy ihany koa ity demo ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Afaka milalao Super Mario Run ho an'ny iPhone sy iPad izao ianao ao amin'ny Apple Store